4 Ihe mgbochi na-aga nke ọma ahịa akpaaka mmejuputa iwu | Martech Zone
4 Ihe Mgbochi n’inwe Ihe Nlekọta Azụmaahịa Na-aga nke Ọma
Thursday, August 25, 2016 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 28, 2016 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na anyị nwere mmasị n'ịkwado ndị na-akwado anyị na ndị ọrụ ibe anyị na ụlọ ọrụ martech, anyị ka bụ ndị na-ere ahịa amaghị ama ma a bịa n'ọtụtụ azịza. Ihe kpatara ya abụghị ihe anyị na-ekwenyeghi na ụfọdụ nyiwe mma karịa nke ọzọ, enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ kwụ ọtọ. Ihe kpatara ya bụ na ikpo okwu ga-abụrịrị ihe ziri ezi maka ụlọ ọrụ na-etinye ya n'ọrụ ma jiri ya rụọ ọrụ.
Mgbasa ozi akpaaka dị na ngalaba a. Fọdụ na-elekwasị anya na ahịa, ndị ọzọ na ahịa. Fọdụ na-elekwasị anya na ahịa B2B, ndị ọzọ na ahịa B2C. Somefọdụ nwere njikọta ọnụ, ndị ọzọ na-anwa ime ya niile n'ime ụlọ. Enweghi uzo ahia zuru oke nke uzo ahia. Fọdụ chọrọ akụrụngwa mmejuputa atumatu, ndị ọzọ nwere mkpọsa emee tupu ha adị njikere ịrụ. Lọ ọrụ ndị na-achọ ịgbalị ịgbalịsi ike ịzụ ahịa ha kwesịrị inyocha akụrụngwa ha, usoro iheomume na atụmatụ ha tupu na-achọkarị azịza akpaaka ahịa.
Ihe dika 58% nke ulo oru anabataghi ngwa ngwa ahia, dika ihe Ọmụmụ ihe 2015 site n'aka Ascend2. Yabụ ma ọ bụ enweghị mmefu ego, oge mgbochi ma ọ bụ usoro mgbagwoju anya nke ime na-egbochi azụmahịa gị ka ọ ghara ịdaba, akwụkwọ ozi a ga-enyere gị aka imeri nsogbu nke ịnwe akpaaka n'ime azụmahịa gị. Uchechi Onyekwere, onye ntụpọ
Dotmailer etinyela ọnụ ihe omuma a nwere ihe mgbochi ise na - enweghị nsogbu azụmaahịa mmejuputa ihe ịga nke ọma:
Time - Ọ nwere ike isiri gị ike ịkwụsị oge ahụ ma wepụta oge iji nyochaa usoro gị.
Resources - Ndị na-ere ahịa anaghị enwekarị ụkọ aka ịrara nye nyocha azịza ọzọ.
Usoro nhazi - Obere mgbanwe nwere ike iwe ogologo oge iji mejuputa ya na ụlọ ọrụ kachasị agile.
mmefu ego - Onye na-eme mkpebi nke na-abụghị onye na-ahụ maka nkà na ụzụ nwere ike ime ka o siere onye na-ere ahịa ike igosipụta ihe mere ngwa ahịa ngwanrọ ahịa ji arụ ọrụ bụ ihe kacha mkpa. Ọzọkwa, ha nwere ike ọ gaghị akwado mmejuputa iwu, ọzụzụ, mmezi na mmekorita ọnụ yana ntinye akwụkwọ ikike.
Usoro usoro - Otutu clunky sistemụ nke na-azụ ahịa kemgbe ọtụtụ afọ nwere ike ime ka ọganihu na ngwa ahịa ngwa ngwa.
Tags: ihe mgbochi na ihe ịga nke ọmaonye ntụpọinfographicakụrụngwa ahịaahia akpaaka mgbochiahia akpaka mmefu egoahia nsogbu nsogbu akpaakammejuputa akpaaka ahiansogbu akpaaka ahịausoro akpaaka ahịanhọrọ akpaaka ahịaahia akpaaka mgbereInfographics Ahịa
Monetizer: Monetize gị foduru, Geo-redirect ma ọ bụ Wepụ Okporo ụzọ
Ọkt 21, 2016 na 1:45 AM
Edemede dị mma! kọwara ihe mgbochi na uru ahịa akpaaka. Ọ bụ n'ezie mkpughe nye ọtụtụ ndị na-eme mkpebi na-esiteghị na teknụzụ. Daalụ maka ịkekọrịta.